यो यौन स्वछन्दताको केन्द्र हो बेलायत, जहाँ आईमाईहरु बलिया छन् । - Complete Nepali News Portal
यो यौन स्वछन्दताको केन्द्र हो बेलायत, जहाँ आईमाईहरु बलिया छन् ।
— रामहरि पौड्याल
‘ह्वाट अ लब्ली कप्पल ! गड ब्लेस देम !!’
किंग्स लिनको सेन्ट मार्गरेट चर्च आज आगन्तुकहरुको उल्लासपूर्ण भीडले भरिएको छ । तिनीहरुको उमंगले सजिएको छ । जोन र जेनिसाका ७ वर्ष लामो प्रेमले आज पूर्णता पाएको दिन । तिनीहरुको खुसीमा मिसिएका थिए सारा इस्टमित्रहरु, साथीसँगीहरु । क्रिश्चियन परम्पराअनुसार पादरीले तिनीहरुको लगनगाँठो कसिदिए एकैछिनमा । सबैले ताली बजाएर समर्थन गरे । हिजोसम्मका सिंगल लाइफ आज म्यारिड कप्पलमा परिणत भयो । मिसेस जेनिसको खुसी उनको मुखाकृतिबाट झल्किएको थियो । उता, मिस्टर जोनलाई सपना झैँ लागिरहेको थियो ।
बिहेको पार्टीको रिसेप्सन भव्य थियो । “डुक हेड“ होटलको बलरूम भरिभराउ देखिन्थ्यो, आगन्तुकहरुको पार्टी क्रेजले । पिउने र पियाउने उपक्रम चल्यो राति अबेरसम्म । डिस्को लाइट, चर्को म्युजिक, पिएर मदहोस मान्छेका भीड । एउटा नौलो मादकता सबैमा देखिन्थ्यो । ती सबैका केन्द्रमा थिए जोन र जेनिशा ।
मधुयामिनिका सुमधुर सम्झनाहरु साँचिए, जीवनभर नभुल्ने गरी । प्रेमका प्रतिज्ञाहरु फेरि दोहो¥याइए, दुबईको अग्लो भवनबाट । भावी परिवारका संरचनाहरु सजाइए । खाकाहरु बनाइए । रोड म्यापहरु कोरिए, सन्… सम्म्र प्रेमको निशानी तिनीहरुको सन्तान जन्माउने भनेर ।
‘ओ हनी ! त्यो अल्लि चाँडै भएन र ? जीवनमा रोमान्स पनि त गर्नुप¥यो नि’– जेनिसाले फिगर कन्सस आफ्नो कायालाई बेडरूमको ठूलो ड्रेसिङ ऐनामा आफूलाई नियाल्दै जवाफ दिई ।
‘अफकोर्स डार्लिङ !’– जोनले चपक्क अँगालो हाल्दै सहमति जनायो ।
एकैछिन तिनीहरु हराए अलौकिक संसारमा । मधुयामिनिका प्रथम चरण ! दोस्रो चरण !!….. बेलायतीहरुको प्रेमले वैवाहिक औपचारिकता पाएर हनिमुनको दैलोसम्म आउँदा धेरै हन्डर र ठक्कर खाएको हुन्छ हरेकका जीवनमा । जति सजिलै बाँधिन्छन् सम्बन्धहरु, त्यत्ति नै सजिलोसँग टुंगिन्छन् सम्बन्धहरु । यो यौन स्वछन्दताको केन्द्र हो बेलायत, जहाँ आईमाईहरु बलिया छन् । तिनकै शासन चलेको छ मुलुकमा शताब्दीयौँदेखि । महारानी एलिजाबेथको मुलुक यो ।
वैवाहिक जीवनका उर्बर समय त्यो जोडीले सन्तानका चाहनालाई धकेल्दै लग्यो रोमान्सका नाममा, व्यस्त प्रोफेसनल करियरको नाममा । त्यसका लागि अपनाइए सस्ता सन्तान नहुने तरिकाहरु । पिल्स, सुई…..सबै सबै उपायले तिनीहरु आफूलाई धपाइरहे । तिनीहरुले सोचे– जीवनका घडीहरु तिनीहरुकै मुट्ठीमा घुम्ने छ आफूले चाहे झैँ, आफूले रोजे झैँ ।
जतिबेला तिनीहरुले चाहे, समयले सायद कोल्टे फेरिसकेको थियो । चालीसको पूर्वाद्र्धमा सुरू गरिएको त्यो पारिवारिक चाहनाले तिनीहरुलाई अपेक्षित लाभ दिएन सोचेजस्तो, सम्झेजस्तो ।
‘सन्तान प्राप्ति’ हरेक दम्पतीको वैवाहिक जीवनको उत्कृष्ट अभिलाषा ! पुस्तान्तरणको एउटा अमूल्य कडी । सन्तानसुखका अनन्त चाहनामा डुब्न पाउँदा हुने अतुलनीय खुसी हरेक युगल प्रेमीहरुका आकांक्षाहरु हुन् । जीवनका इच्छाहरु हुन ।
यस्तै सुनौला भविष्य साँचेर सात–सात वर्ष लामो आफ्नो प्रेमलाई विवाहको औपचारिकतामा टुंग्याएका थिए तिनीहरुले । त्यो सम्बन्ध कति पाको थियो दुवैका लागि । जोनले त्योभन्दा अगाडि आठवटा असफल प्रेम व्योहोरेको थियो भने जेनिशाले सातवटा त्यस्ता अत्यास लाग्दा कहरहरु काटेकी थिई, आजको दिनसम्म आइपुग्दा । अब बढी त्यस्ता सस्ता प्रेम र डेटिङमा नहराउने संकल्पले ती दुई जोडी एकआपसमा गाँसिएका थिए । तिनलाई सात–सात वर्षको कठोर परिश्रमले सिञ्चेका थिए । खारेका थिए तिनीहरु प्रेमको साँचो परीक्षामा । तीसको उत्तरार्धमा थालिएको त्यो वैवाहिक सम्बन्ध चालीसको पूर्वार्धमा मात्र सन्तान प्र्रािप्तका लागि तयार भएको थियो ।
एउटा पूर्ण चाहनामा होमिएको थियो । पहिलो गर्भको उत्कट खुसी मात्र केही हप्तामा मिस क्यारेजमा टुंगियो । दोस्रो प्रिग्नेन्सी बाल बाल बाँच्ने घटना बन्यो । इक्टोपिक प्रिग्नेन्सीले दाहिनेपट्टिको फेलोपिन ट्युब काटेर फाल्नुप¥यो । केही घन्टा मात्र ढिला भएको भए जीवन सकिन सक्थ्यो जेनिशाको । सन्तान प्राप्तिका यस्ता दर्जनौँ हृदयविदारक ट्रेजेडीहरुको तिनीहरुले सामना गरिरहे । युरोपको केन्द्र बेलायत आधुनिक मेडिकल साइन्सका यावत् सुविधाहरु भएर पनि त्यो जोडीलाई सन्तानसुखको सुयोग कहिल्यै मिलेन ।
‘ह्वाट अ सेम हनी ! किन मैले तिमीलाई एउटा उत्तराधिकारीसमेत दिन सकिनँ ? म बाँझी आइमाई ! म कुनै कामकी रहिनँ !’– गहभरि आँसु पार्दै जेनिशाले भनी ।
जोनले सम्हालिने प्रयास ग¥यो । सन्तान नहुनुको पीडा चर्को थियो । सन्तानलाई सकुशल अवतरण गर्न नसकी केही हप्ता र महिनामा मिस क्यारेजको दुःखद क्रूरतालाई पटकपटक सहनुपर्दा त्यसले निम्त्याउने शारीरिक तथा मानसिक तनाव र ती जोडीले भोग्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यो । धेरै यस्ता मिस क्यारेजबाट वाक्क भएकी बेलायतकी वरिष्ठ प्रसूति विज्ञले तिनीहरुलाई अन्तिम अस्त्रका रुपमा टेस्ट ट्युब बेबीको सल्लाह दिइन् ।
पहिलो प्रयास, दोस्रो प्रयास र अन्तिम प्रयास सबै सबैले हावा खाए । त्यत्रो महँगो प्रविधिले तिनीहरुलाई कंगाल बनायो । मानसिक र शारीरिक रुपमै बेस्सरी टुटेफुटेका त्यो जोडीले लगभग सन्तानको आशा मारिदिएका थिए ।
उनीहरुको प्रोफेसनल लाइफ सधैँको मिस क्यारेज र सधैँको अपूर्ण प्रिग्नेन्सीले चौपट भैसकेको थियो ।
एकदिन लन्डनबाट फर्कंदै गर्दा ट्रेनमा कसैले फालेको पत्रिकामा सरोगेट मदरको कथा पढेर जेनिशा दंग पर्दै घर फर्की । उसका सन्तान प्राप्तिका सपनाहरु फेरि पुनर्जागृत भएर आए ।
घरमा आएर उसले गुगलमा सर्च गरी । सरोगेट मदरको सम्भावना, लाग्ने शुल्क र त्यो देशको सरोगेसी कानुन सबैलाई एकपटक रामोसँग अध्ययन गरिसकेर त्यो जोडी फेरि तम्सियो आफ्नो सन्तान प्राप्तिको महासपनामा ।
सरोगेसी सेन्टर, उनीहरुको चाहनाको संसार बनेर खडा भयो । धेरै दिनको मेडिकल जाँच पड्ताल । धेरै मोलमोलाइपछि तिनीहरु तयार भए सरोगेसीका लागि । एउटी नेपालबाट झिकाइएकी पहाडी दिदी पैसाका लागि तिनको भाडाको गर्भ बोकिदिने भइन् । त्योबापत् उनले १२ लाख रूपैयाँ पाउने भइन् । नेपालबाट भूकम्पले आफ्नो थातथलो सबै ढलाएपछि राम्रो जागिरको चक्करमा सिन्धुपाल्चोकबाट अनेक हन्डर र ठक्कर खाँदै एउटा दलालमार्फत त्यो काम गर्न थालेकी रहिछन् ।
गोरे दम्पतीका लागि त्यो १२ लाख केही थिएन, तथापि ती दिदीका लागि त्यो रकम ठूलै थियो तिनको औकातभन्दा । गरिबीले बनाएको खाडल पुर्न उनले त्यो काम स्वीकारिन् ।
आधुनिक मेडिकल साइन्सका यावत् सुविधाले सजिसजाउ त्यो सरोगेसी सेन्टर इन्डियामै नम्बर एक थियो । डाक्टर श्रीवास्तवको टोलीले तिनीहरुको डिम्ब र शुक्राणुलाई कृत्रिम रुपमा झिकेर ल्याबमा निषेचित गराई तिनै नेपाली आईमाईको गर्भाशयमा प्रत्यारोपण गरियो । उनलाई महिनौँसम्म त्यही सेन्टरमा राखेर पूर्ण निरीक्षण गरियो । अन्त्यमा डाक्टरले त्यो सफल भएको घोषणा गरे ।
जोन र जेनिशा खुसीले उफ्रिए त्यो क्षण । अब हाम्रो हातमा सन्तानसुख सल्बलाउने र चल्बलाउने छ, त्यो कल्पना मात्रले पनि त्यो जोडीलाई एउटा अदभुत रोमाञ्च पैदा गरिरह्यो ।
आफ्नो पेटमा हजारौँ माइल परका बेलायती गोरेहरुको नासोलाई हुर्काइबढाई गर्नु सानो काम थिएन । त्यो पनि, पूरा नौ नौ महिना आफ्नो गर्भमा । गरिबीको एउटा नाम मजबुरी । परिस्थितिको दास बन्नुको अर्को विकल्प पनि तिनमा थिएन । आफूलाई धिक्कारिरहेका बेला तिनले यसो सोचिन्–
यो पनि एउटा धर्म हो कसैलाई सन्तान बनाइदिनु, बाँझोपनबाट मुक्ति दिलाइदिनु । कसैसँग कुकर्म गरेको पनि त होइन, सबै कुरा डाक्टरले ठिक्क बनाइदिएका छन् । मात्र, एउटा कृत्रिम सुई त हो मैले लिएको । त्यो गोरेसँग म सुतेको त छुइनँ नि । पैसाका लागि आफूलाई बेच्ने पनि छन् । आफूलाई बजारमा पस्कनेहरु पनि छन् । म मात्र कसैको सन्तान बनाइदिने भाडाकी आमा बनेँ । भोलि यो सन्तान हवाईजहाज चढेर बेलायत पुग्ने छ । के यसलाई मेरो माया लाग्ला त ? ती गोरे र गोरेनीले मलाई सम्झलान् त ? यी सबै भावनाहरु उनका मनमा खेल्दै रहे । आँसुले उनलाई भिजायो, आफ्नो बाध्यता सम्झेर ।
उता, जोन र जेनिशा दिन गनिरहेका थिए, समय पर्खिरहेका थिए । आफ्ना उत्तराधिकारीको स्वागतमा स्वगतातुर देखिन्थे । बेबीका लागि चाहिने सामान, बेबीको कोठा सबै सजाएर राखेका थिए । मनभरि र तनभरि एउटा उमंग तरंगित भैरहेको थियो । सारा इष्टमित्रहरु समेत तिनीहरुको खुसीमा सामेल हुनलाई हतारिरहेका थिए र सोधिरहेका थिए । बेबीको आगमन उनीहरुले पर्खिरहेका थिए । वातावरणमै एउटा छुट्टै मादकता नाचेको थियो, बेलायतको किंगिस्लन टाउनमा ।
समय आफ्नो गतिमा कुदिरह्यो, तिनीहरुको अपार खुसीसँगै । वर्षौंदेखिको सन्तानसुखको पीडाले भर्खरै मुक्ति दिलाउँदै थियो । एकातिर धुमधामसँग नवआगन्तुकको स्वागतमा मान्छेहरु लालायित थिए भने अर्र्काितर ती भाडाकी आमाको आफ्नै दुःख र दर्दहरु थिए । प्रेग्नेन्सीको अन्तिम प्रहरले उनलाई हुनसम्म गाह्रो भैरहेको थियो । स्वासप्रश्वासमा बाधा पुगिरहेको थियो । पेट फुलेर दमाहाजस्तो भएको थियो । बच्चाको दिनहुँको किकका कारण सुत्न अप्ठेरो भैरहेको थियो । उनलाई कुनै पनि कुराको फ्रिडम थिएन । सबै कुरा उनीहरुको मर्जीअनुसार चल्नुपर्ने थियो बच्चा नजन्मुन्जेल ।
यसरी हुर्काएको सन्तान भोलि अर्काको हुन्छ । बेलायती बाबुआमाको देशमा हुन्छ । मैले फगत एकपटक हेर्नसमेत पाउँदिनँ । यस्तो सम्झेर कहिलेकाहीँ उनी निकै भावुक हुन्थिन् । आफ्नै रगत नभए पनि आफूले गर्भमा हुर्काएको र बढाएको सम्झेर उनी द्रवित हुन्थिन् ।
— हरे भगवान् ! मैले मात्र पैसाका लागि कसरी आफ्नो कोख बेचेँ ?
— के भाडाकी आमा सरोगेट मदरका कुनै पीडा हुँदैनन् ?
— आफ्नो गर्भगृहमा जन्मेको बच्चाको कुनै कानुनी हक हुँदैन ?
जतिजति उनको डिउ डेट नजिक आउँछ, उतिउति उनको मन उद्वेलित भैरहन्छ बेस्सरी सम्झनामा ।
आखिर समय आइपुग्यो । यथासमयमै तिनलाई व्यथा लाग्छ । सबैले दौडाउँदै हस्पिटल लैजान्छन् । हस्पिटल भरिभराउ हुन्छ । अनेकथरी परीक्षण र अनेकथरी जाँचपछि पनि डेलिभरी नर्मल नहुने देखेर उनलाई अप्रेसन थिएटरतिर दौडाइन्छ ।
लामो लाइफ थ्रेटेनिङ अप्रेसनपछि उनको डेलिभरी सकिन्छ । एउटा स्वस्थ बच्चा हस्पिटल थर्काउने गरी रून्छ– चियाँ ! चियाँ !! चियाँ !!!
वरिपरिका सबैमा एउटा ठूलो खुसी त्यो रूवाइले ल्याउँछ । त्यो खुसी जसको प्रतीक्षामा एउटा सिंगो जीवन जोन र जेनिशाले तड्पाइरहेका थिए । खोजिरहेका थिए लामो समयसम्म त्यसलाई । तिनले के गरेनन् सन्तानसुखका लागि ? सधैँ हरेस खाने त्यो दम्पती आज आफ्नो काखमा बच्चा रोइरहेको सुन्दा अवाक् भए । एकछिन केही पनि बोल्न सकेनन् । तिनलाई लाग्यो– यो सपना हो कि बिपना ? वास्तवमा त्यो बिपनै थियो । त्यो रूँदै गरेको बच्चा तिनीहरुकै सन्तान थियो र थियो तिनीहरुको उत्तराधिकारी । ती नेपाली आईमाई त मात्र साधन थिइन्, त्यो बच्चालाई नौ महिनासम्म पेटमा पालिदिने र बढाइदिने । एउटा कन्ट्रयाक्ट सकिएको थियो बच्चाको आगमनसँगै ।
जेनिशाका आँखा रसाए, हात पनि थरथर कामिरहेका थिए । बच्चालाई हातमा समाउँदै उनले आँखा चिम्म गरिन् र भगवान्लाई धन्यवाद दिइन् ।
— थ्यांक्यु डार्लिंङ ! तिमीले मेरो सपनालाई बिपनामा परिणत ग¥यौ ।
— म कहिल्यै तिम्रो यो गुण बिर्सने छैन र आजन्म तिम्रो ऋणी हुने छु ।
उनले दह्रो अंकमाल गरिन् उनीसित । जोनले पनि त्यस्तै भन्यो र उनलाई त्यसरी नै कृतज्ञताको हग ग¥यो । बच्चालाई हेर्दै तिनीहरु हराए, आआफ्नै संसारमा ।
बच्चा अब मस्तसँग सुतिरहेको थियो प्रसूति वार्डमा । उसलाई दुनियाँका यी सारा काम र कन्ट्रयाक्टसँग कुनै लिनु–दिनु पनि थिएन । ऊ कसरी जन्म्यो र कहाँ जन्माइयो ? यो उसको सरोकार पनि थिएन । उसलाई भोक लागेको बेला दूध चाहिन्थ्यो, बस् उसको संसार त्यत्ति थियो वर्तमानका लागि ।
दूधको तयारी ।
नेप्पी चेन्ज ।
मसाज, नुहाइधुवाई सबै चल्दै रह्यो । त्यो भाग्यमानी बच्चाका लागि सेवकहरु टन्न थिए ।
उता, भर्खरै ठूलै अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माइदिएकी महिलाको स्वास्थ्य खस्केको थियो नराम्ररी । आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर कसैको कोख भर्न खोज्ने कसैको सन्तान प्राप्तिको अभिलाषालाई पूर्णता दिने महान् कार्य गर्ने तिनी लम्पसार थिइन् बेडमा मुर्दा झैँ ।
समयको गतिलाई रोकेर र छेकेर राख्न सकिँदैन । त्यो आफ्नै प्रवाहमा बगिनै रहन्छ अथाह नदी झैँ लक्ष्य भेट्न अविराम । समुद्र भेट्न आतुर नदी बाटाघाटाका अवरोधलाई आफैँ पन्छाउँदै बढिनै रहन्छ समय झैँ ।
जन्मनु र मर्नु सृष्टिका आफ्नै नियमितता हुन् । आज ऊ जन्माइएको छ । आधुनिक विज्ञानको चमत्कारका रुपमा एउटाको रक्त भएर अर्काको कोखमा हुर्केर धर्तीमा खडा भएको छ । हिजो यो सम्भव थिएन । आज सामान्य भएको छ पैसा हुनेहरुका लागि । आफ्नो कोखमा राख्ने झन्झट नगर्नेहरुका लागि यो केही लाख रूपैयाँको खेल भएको छ । भोलि यो विज्ञान कहाँ पुग्ने हो ? मातृत्वको परिभाषा खुम्चँदै गएको यो वर्तमानमा भोलि कसरी प्रस्तुत होला ?
महिनादिन पनि कति छिट्टै बिते । आज उनीहरु बेलायत उड्दै छन्, सानो छोरा जोजेलाई लिएर । बिहानदेखि नै उनीहरुलाई फुर्सत छैन आफ्ना सुटकेसहरु कस्न, आफ्ना सरसामानहरु पोको पार्न ।
उता, ती सरोगेट मदरको मनभित्र एउटा ठूलो आँधी र एउटा भयंकर हुन्डरी मच्चिँदै छ । आफ्नो कलेजोको टुक्रालाई आज उनीहरुले लुटेर लाँदैछन् । नौ नौ महिनाको उनको पीडा ! उनको भावनात्मक उपहारलाई उनीहरुले पु¥याउँदै छन् अर्कै संसारमा, अर्कै महादेशमा, अर्कै परिवेशमा । खोइ, जीवनमा फेरि भेट होला कि नहोला यो मेरो रक्तको टुक्रासँग ! उनले एक्लै कल्पिरहेकी छन् यो मनोविनोद आफैँसँग ।
आँखाबाट दुई थोपा आँसु चुहाइन् तिनले ।
बाहिर तिनीहरुलाई एयरपोर्ट पु¥याउन ट्याक्सी आइसकेको थियो । सबै सामानहरु राखिए । बच्चालाई बोकेर तिनीहरुले उनीसँग बिदा मागे । त्यो हृदयविदारक दृश्य हेरिनसक्नु थियो । उनको मनमा मातृत्वको महासागर उर्लेको थियो त्यो समय ।
उनीहरुले घरको गेट काट्दै गर्दा शान्त बालकसमेत क्वाहा ! क्वाहा !! क्वाहा !!! गरेर रून थाल्यो आकाश थर्काउने गरी । बादल नै बर्साउने गरी रोयो बच्चा । उनले त्यो दृश्य हेर्न र देख्न सकिनन् । उनी भुइँमा थचक्क बसिन् र पछारिइन् ।
गलबन्दीको गायक प्रकाश सपुतलाइ कामी भनेपछि
अनिल तामाङले रबि लामिछाने संग मागे
लोक गायक बिष्णु खत्रीको असारे गीत
प्रकाश सपुतलाई कामि भन्ने सुबास मंगोललाई
श्रीमानले श्रीमतीलाई रंगेहात भेटेपछि श्रीमतीको होस्
देश बिदेशबाट यी घटनाको विरुद्ध शसक्त
दिदीसंग बिहे गरेर भाइरल भएका यी
अन्तत: जातीय विभेद भएपछि प्रकाश सपुतले
देश बिदेशबाट यी घटनाको विरुद्ध शसक्त आन्दोलन हुने छ !...
देशमा नयॉं तरंङ्ग ल्याए रबि लामिछानेले, फटाहाहरुले बदनाम गर्न खोजेपनि...
पुरुष एकल नहुने , महिला मात्र एकल कसरी हुन्छ? सरू...
अमेरिकन एम्बेसी, भिषा अन्तर्बातामा सोधिने मुख्य प्रश्नहरू र सल्लाह :
साप्ताहिक राशिफल : २०७६ असार ०८ देखि १४ गते सम्म...
मेयरसाबलाई कुनै माध्यमबाट मेरो यो अनुरोध पुराइदिनु होला जो कसैले...